China Simple Silver Jewelry Gold Plated Small Hoop Huggie Earrings Manufacturing and Factory | Fitiavana & Fitiavana firavaka
Firavaka volafotsy tsotra nopetahana volamena kavina kely Huggie
Fitaovana: vita amin'ny volafotsy s925, tsy misy vato, kely ny habeny, mety amin'ny fitafy andavanandro.
Ny antsipiriany momba ny famolavolana: Ny endrika natsangana ambonin'ny tany dia tsara tarehy sy mahafinaritra;
Ny fametahana volamena dia tsy mora levona, ary mety tsara ny mitafy, izay mety kokoa amin'ny akanjo isan'andro.
Classic kavina famolavolana, tsara tarehy, tsara tarehy sy tsotra rivo-piainana, ny malefaka sy milamina arc famolavolana, ny hatsaran-tarehy dia tsara tarehy avy amin'ny fitaovana ho amin'ny asa tanana, ny mahazatra endrika manampy ny lamaody ody ny vehivavy, lamaody sy ny maso-misarika, kanto toetra. toa tsotra endrika endrika no endri-javatra tsy manam-paharoa ny mpamorona ny hakingan-tsaina, tsy mba handresy ny maso amin'ny tafahoatra loko, fa mba handresy amin'ny kely sy mahafinaritra fihetseham-po. Raha mijery azy, dia ho tsapanao ny famirapiratry ny metaly mamirapiratra. tsapao avy ao am-ponao ny firafiny mavesatra.
Voafantina tsara 925 volafotsy nopetahany takela-bolamena mamirapiratra mamirapiratra, ny ivelany ara-nofo sy ny fihetseham-po anatiny dia tafiditra, ary tsy manam-paharoa fahatsapana ny rendrarendra ho avy. Exquisite asa tanana, tena tsipiriany momba ny electroplating dingana, meticulous fampisehoana, maharitra loko mamirapiratra. mora kokoa ny mitafy, matanjaka sy azo antoka.Tara volafotsy tena izy, mety amin'ny hoditra saro-pady.
Tohano ny fametahana manokana loko hafa
Ny kavina hinged aoriana sy ny post snap miaraka amin'ny tsindry maivana ary mihidy eo amin'ny toerana kely notches. Pure volafotsy dia tsy mora tarnish ao amin'ny tontolo madio oksizenina. Na izany aza, ny varahina ao amin'ny 925 sterling silver dia mety hihetsika amin'ny ozone sy hydrogène sulfide eny amin'ny rivotra ary hahatonga ny volafotsy sterling ho maloto. Ny menaka manitra, ny famafazana volo, ary ny hatsembohana be dia be koa dia mety hahatonga ny fandotoana haingana kokoa.
Raha mitady hamidy indray ny firavakao mipetaka volamena ianao ary te hahafantatra raha misy vidiny izany, ny marina dia ny firavaka volamena voapetaka dia tsy mendrika loatra. Ny anton'izany dia satria manify loatra ny fonony, na sosona, amin'ny volamena eo ivelan'ilay zavatra, ka tsy misy afa-tsy mikrôna kely ny volamena eo amin'ny takelaka.
Mandra-pahoviana no haharitra ny volafotsy sterling volamena?
Amin'ny ankapobeny, ny firavaka vita amin'ny volamena dia mety haharitra roa taona eo ho eo alohan'ny hanombohan'ny fametahana volamena maloto sy mihasimba.
teo aloha: Fashion Rainbow Cubic Zirconia 925 Silver Hoop Huggie Kavina
Manaraka: 925 Sterling Silver Square Ametista peratra ambongadiny lamaody Adjustable fampakaram-bady peratra vatosoa voajanahary